Macaamiil Qaali Cay Ah | Martech Zone
Jimco, Diisambar 14, 2007 Isniintii, September 24, 2012 Douglas Karr
Waan hubaa in qof kastaa leeyahay mid ka mid ah macaamiisha noocan ah. Runtii waa laygu barakeeyey tobankii sano ee la soo dhaafey waxaan lahaa macmiil runtii aad ugu riyaaqey ila shaqeynta. Waan arkay sida shirkadaha qaar ula macaamilaan macaamiishooda waana necbahay. Waxaan had iyo jeer bartilmaameedsanayay heer sare oo adeeg ah. In kabadan ayaan ballanqaaday oo waan sifeeyey. Laakiin, geesh one hal macmiil… haddii aan kaliya warqad u qori karo…
Macaamiisha Cayda Qaaliga Ah,
Dib markii aad noo dooratay inaanu iibinno, waxaad weydiisay su'aalo fara badan waxaadna noogu jiiday si naxariis darro ah maraya mayl cajalad guduudan kahor aad go'aansaday inaan annagu ahayn alaab kugu habboon adiga. Hadda oo aad na dooratay, khaladkeenu ma aha in aad hadda ku faraxsanayn astaamaha iyo waxqabadka aad noo muujisay ee aad adigu jeceshay. Been ma sheegin. Kamaan been sheegin. Adiga ayaa ahaa qofka maskaxdaada beddelay.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku faanno xaqiiqda ah inaan la kulannay 100% aad shuruudaha oo dhaafiyey dhammaantood aad waqtiyada kama dambaysta ah Taasi waxay ahayd balan qaadkii aan kuu sameynay waana ilaalinay.
In kasta oo laga yaabo inaad rumeysan tahay, diiradeennu ma ahan inaan burburinno meheraddaada. Hadafkeenu waa inaan sii wadno horumarinta xalalka ugu waaweyn meeraha. Waan ognahay inaan ka dhaafno dhamaan iibiyeyaasha kale qaababka, joogteynta, adeegsiga, waxaanna leenahay lakabyo kadis ah oo ka badan shirkado kale.
Inkasta oo tartamayaashayagu aysan kuu soo bandhigin emaylkooda ama lambarrada taleefannadooda, haddana waxaan kuu soo bandhignay mid walba oo ka mid ah shaqaalaheena shaqsi ahaan, waxaan ku siinnay macluumaadkeena xiriir buuxa, waxaanan leenahay 24/7 taageero shakhsi ah Ujeeddada tani maahan in lagu siiyo warbaahin dhexdhexaad ah oo aad na yaso, halkaas ayey u tahay maxaa yeelay waxaan danaynaynaa adiga, shirkaddaada, iyo macaamiishaada.
Macaamiil kastaa waa mudnaantayada # 1. In kasta oo taasi u muuqato mid aan la aqbali karin haddii aad lacag badan nala qaadato, waad ku qanacsan tahay markii kuwa kale ay nala qaataan lacag aad u badan.
Waxaan si joogto ah u baareynaa isbeddellada warshadaha, tikniyoolajiyadda, iyo saldhigga macaamiisha sidaa darteed maahan inaad sidaas sameysid. Tani waxay na siineysaa aragtiyo istiraatiiji ah iyo dib-u-soo-saarka sheyga ee astaamaha iyo hagaajinta oo si fiican u socda wixii ka dambeeya sanadka soo socda. Ka soo horjeedka caqiidada caanka ah, kuma fadhiisanayno sariir ciyaarista World of Warcraft waxaanan sugeynaa cabashada soo socota. Waan shaqeyneynaa, waana maalgashanaynaa, waxaanan soosaaraynaa horumarin maalin kasta. Waxaan haynaa jadwalkeenii shaqada. Dalabyadaada si deg deg ah loo sii daayo muuqaal cusub waxay saameyn ku yeelaneysaa qorshooyinka aan horeyba uga shaqeyneyno iyo yoolalka aan higsaneyno. Ogsoonow inaan ku dadaali doonno inaan dalabyadaada ka hor marino kuwa kale - laakiin waxay qaadan doontaa waqti si loo saxo jadwalka, yoolalka iyo himilooyinka qof kasta oo ka tirsan ururkeenna.
Ku qeylinta astaamaha in la dhammaystiro shalay ma hagaajinayso tayada ama kalsoonida muuqaalkaas. Waxaan haynaa habab, tijaabooyin, iyo hubin tayo leh oo adiga loogu talagalay ilaalinta, ma ahan kaayaga.
Haddii, mar kasta oo aan ku soo wacno, ujeeddadaada kaliya ay tahay inaad na aflagaado oo na yaso - annagu jidka ugama bixi doonno inaannu ku soo wacno oo aan kaa caawinno inaad horumariso natiijooyinkaaga ganacsi. Kama baran karno haddii aadan fursad na siinin. Waxaan joojin doonaa ka bixitaankeena si aan kuu caawino maxaa yeelay waxaan daneyneynaa shaqaalaheena oo nagu filan oo aanan dooneyno inaan aragno iyaga oo lagu xadgudbay. Waxaan doorbidi lahayn inaan waqtigeena la qaadano macaamiisha aqoonsada khibrada ay maalgashadeen oo raba inaan si wadajir ah noola shaqeyno hadaf guud.
Ganacsigeennu ma korayo toban laab sanadkii marka loo eego sannadka oo dhan maxaa yeelay waan fahansanahay mana fahmin waxa aan qabanayno Waxaan bedeleynaa warshadaha oo waa naloo aqoonsan yahay. Isbeddelku wuxuu u baahan yahay xamaasad, dhaqaale iyo waqti. Naga samir marna waligaa kama xumaan doontid. Macaamiishayadu way nala shaqeyn karaan ama way nala dagaallami karaan, yaad u malaynaysaa inuu wax badan ka faa'iidi doono?
Ka dhigista shaqaalahaaga kuwa faraxsan in la caddeeyay inay hagaajineyso daacadnimadooda iyo waxsoosaarkooda. Miyaad u maleyneysaa inay ka duwan tahay iibiyahaaga dalabka?
Iibiyaha Waxaad Ahayd Mid Caqli Badan Oo Xul Ah
Tags: APIcodeeyebarnaamijka barnaamijyada barnaamijkab2cciyaarahajsonmaamulida sumcaddanasashosaabuunkala qaybinta imtixaankaimtixaankara'yi celinta isticmaalewordpress iphonewordpress iphone appXML
Isbarbar dhigga iyo shabeelka: Waa inuu lahaadaa Macaamilka Ganacsiga Mac
15, 2007 at 7: 28 PM
Waan ka helay Labada qodob ee hore ayaan reword dib uga dhigi lahaa sidan:
“Markii aad noo dooratay inaanu iibinno, waxaad weydiisay su’aalo fara badan waxaadna noo jiiday si arxan-darro ah iyada oo la dhex marayo maylal cajalado casaan ah, waxaad naga dhigtay si faahfaahsan masuuliyadeena khuseeya iyo ilaa aad ka hesho warbixin faahfaahsan oo shaqo ah oo aad oggolaatay inaad qabato adigu waxaad go'aansatay inaan annagu kuu ahayn xalka saxda ah.
Hadda oo aad na dooratay, khaladkeenu ma ahan in dhibaatooyinkaaga ganacsi ay is beddeleen oo aadan hadda ku faraxsanayn astaamaha iyo shaqooyinka aan isla meel dhignay in lagu xallin doono dhibaatooyinka sida aad u qeexday markaa. Been ma sheegin. Kama been sheegin. Duruufahaaga iyo deegaankaaga ayaa isbadalay.
Hadda koox ahaan waa inaan dib isu abaabulnaa oo aan diiradda saarnaa
sida ugu dhakhsaha badan ee xal waara loogu gaadho dhibaatooyinka ganacsi ee dib loo qaabeeyey …………………
15, 2007 at 9: 05 PM
Waan ku faraxsanahay inaad soo dhejisey nooca PG-13. haha. Waxaan jeclaan lahaa inaan u diro dhowr dersin oo ka mid ah macaamiisha qaar. Tani miyay ku hoos jirtaa liisanka wadaagga hal-abuurka ah? Maqaal weyn.
16, 2007 at 2: 04 AM
Gosh, dhammaantood waxay u muuqdaan kuwo dhab ah. Ku dhowaad sida aad hadda ugu nooshahay taleefankaas dib u cusbooneysiinaya… '-)
16, 2007 at 10: 14 AM
E-mayllada ayaa runtii ka baxsan shaxda sidoo kale! 🙂
16, 2007 at 6: 03 AM
Haa, waxaan haystay qaar ka mid ah macaamiisha oo aan faraxsanayn markii aan labanlaabmay taraafikradooda iyo iibintooda… goor dambe ayaan kuu sheegayaa inay garanayaan shirkad laga leeyahay Hindiya oo siisa 1000000 qof oo soo booqda maalin kasta $ 25
17, 2007 at 8: 59 AM
U daa Cade si aad tan ugu dhigto mid fudud oo codkar ah oo cod ah Lagu been abuurtay!